Obodo EU kacha ọhụrụ Slovakia nyere iwu ka akpọchie maka ịgba ọgwụ mgbochi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Slovakia » Obodo EU kacha ọhụrụ Slovakia nyere iwu ka akpọchie maka ịgba ọgwụ mgbochi
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Slovakia • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye isi ala Slovakia Eduard Heger
N'ime ụbọchị ole na ole gara aga, Slovakia ahụla ọnụ ọgụgụ ndekọ nke ọrịa ọhụrụ, gụnyere ihe karịrị 8,000 na Tuesday, ebe ụlọ ọgwụ na-agwụ ohere iji gwọọ ndị ọrịa COVID-19.
Slovakia na-achọ igbochi nlọghachi nke ọnụọgụ ọrịa COVID-19 na nnabata ụlọ ọgwụ n'oge oyi.
Slovakia nwere otu n'ime ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi kachasị dị ala na European Union, ebe ihe karịrị 50% nke ndị mmadụ ka amabeghị.
Mba dị ihe dị ka nde 5.5 ka etinyerela naanị nde mmadụ 2.5 megide nje a.
Ka Slovakia na-achọ igbochi ịmaliteghachi ọrịa coronavirus na nnabata ụlọ ọgwụ n'oge oyi, mgbe ọ kọchara ọnụ ọgụgụ ndekọ nke ọrịa COVID-19 ọhụrụ n'oge na-adịbeghị anya, Mịnịsta Ala mba ahụ, Eduard Heger, kwupụtara “mkpọchi maka ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi” taa.
N'ime ụbọchị ole na ole gara aga, mba Europe ahụla ọnụ ọgụgụ ndekọ nke ọrịa ọhụrụ, gụnyere ihe karịrị 8,000 na Tuesday, ebe ụlọ ọgwụ na-agwụ ohere iji gwọọ ndị ọrịa COVID-19.
Heger kwupụtara mmachi ọhụrụ ahụ na nnọkọ mgbasa ozi na Thursday, na-eme Slovakia ihe kachasị ọhụrụ European Union obodo iji mejuputa mgbochi mkpọchi na ndị na-enwetabeghị ọgwụ mgbochi COVID.
Mmachibido iwu ọhụrụ na Slovakia, nke na-amalite na Mọnde, Nọvemba 22, ga-achọ ka a gbaa ndị mmadụ ọgwụ mgbochi ma ọ bụ gbakee na COVID-19 n'ime ọnwa isii gara aga ịbanye n'ụlọ nri, ụlọ ahịa na-adịghị mkpa, ma ọ bụ ihe omume ọha.
Slovakia nwere otu n'ime ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi kachasị dị ala na European Union, ebe ihe karịrị 50% nke ndị mmadụ ka amabeghị. Mba dị ihe dị ka nde 5.5 ka etinyerela naanị nde mmadụ 2.5 megide nje a.
N'izu a n'izu a, Austria ghọrọ mba mbụ wetara mmachi na ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi, ka ọ na-achọ igbochi nrụgide n'ụlọ ọgwụ na ngalaba nlekọta mberede. Ntugharị a malitere n'etiti abalị na Mọnde maka onye ọ bụla dị afọ 12 na karịa nke na-anatabeghị ọgwụ mgbochi COVID-19 ma ọ bụ gbakee na nso nso a na nje ahụ.
German steeti Bavaria na Czech Republic soro Austria na igbochi ohere maka ndị anaghị agba ọgwụ mgbochi. Naanị ndị nwere ike igosi akaebe ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ na ha gbakere na nso nso a na COVID-19 ka a ga-ahapụ ịbanye n'ọha ọha, dị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ihe nkiri, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na ụlọ ahịa.